डिभी खुल्यो ! यसरी भर्नुहोस डिभी - केन्द्र खबर
डिभी खुल्यो ! यसरी भर्नुहोस डिभी
२०७८ अशोज २१ १५:३५
अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिसा (डिभी)को खुलेको छ। (बुधबार) गएराती नेपाली समयअनुसार राती पौने १० बजे (अक्टोबर ६, २०२१) बाट आवेदन खुलेको काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावास ले जानकारी दिएको छ ।
बुधबारबाट खुला भएको डिभी कात्तिक २३ (नोभेम्बर ९, २०२१) सम्म खुला रहनेछ । दूतावासले डिभी चिट्ठा भर्नका लागि कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने समेत प्रष्ट पारेको छ। दूतावासले चिट्ठा भर्नका निम्ति आवश्यक परेअनुसार परिवारका सदस्य, साथी वा जान्नेसँग सहयोग लिन आग्रह गर्दै कुनै पनि कन्सल्टेन्टको सहयोग नलिन आग्रह गरेको छ।
डिभीका लागि छनोटमा परे नपरेको थाहा पाउनका २०७९ वैशाख २५ वा त्यसपछि www.dvlottery.state.gov मा गई आफ्नो कन्फर्मेशन नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ। आवेदन दर्ता गर्दा आवेदकले आफ्नो इमेल ठेगाना समावेश गर्नुपर्ने छ।
५५ हजार विदेशीलाई भिसाका लागि छनोट गर्ने बताइएको छ।